Football Khabar » विश्वकप छनौट खेल्ने अर्जेन्टिनाको टोली घोषणा : को–को परे ?
विश्वकप छनौट खेल्ने अर्जेन्टिनाको टोली घोषणा : को–को परे ?
दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाले सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप छनौटका लागि साउथ अमेरिकी जोनमा जारी छनौट खेल खेल्ने आफ्नो राष्ट्रिय टोली घोषणा गरेको छ । आज शुक्रबार बिहान अर्जेन्टिनाका निमित्त प्रशिक्षक लिओनल स्कालोनीले २५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् ।
यस चरणको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेकमा अर्जेन्टिनाले दुई खेल खेल्नेछ । जसमा पहिलो खेल नेपाली समयअनुसार नोभेम्बर १३ तारिखमा आफ्नो भूमिमा पराग्वेसँग खेल्नेछ । त्यसपछि दोस्रो खेल पेरूसँग उसकै भूमिमा नोभेम्बर १८ तारिखमा खेल्ने तालिका छ । अर्जेन्टिनाले यसअघि भएका २ वटै खेल जितेको छ । ऊ ६ अंकसहित अंक तालिकामा दोस्रो स्थानमा छ । ब्राजिल पनि समान ६ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ ।
यसपटक घोषित टोलीको कप्तानी लिओनल मेस्सीले नै गर्नेछन् । मेस्सीको कप्तानीमा सबैजसो प्रमुख खेलाडीलाई समेटिएको छ । यसअघिका दुई खेलका लागि टोलीमा नरहेका एन्जल डि मारियालाई यसपटक टोलीमा फर्काइएको छ । तर, यसअघि पनि टोलीमा नरहेका सर्जियो अगुइएरो भने यसपटक पनि टोलीमा परेका छैनन् । यसअघि उनी घाइते थिए ।
त्यसैगरी, यसपटक पनि स्टार फरवार्ड माउरो इकार्डीलाई टोलीमा राखिएको छैन । इकार्डी लामो समयदेखि राट्रिय टोलीमा परेका छैनन् । कप्तान मेस्सीले कप्तानी गरेको टोलीमा उनी लगातार छुट्दै आएका छन् । २७ वर्षका इकार्डीले हालसम्म अर्जेन्टिनाका लागि मात्रै ८ खेल खेलेका छन् ।
अर्जेन्टिनी टोलीमा बार्सिलोनाका मेस्सीसहित इटालियन इन्टर मिलानका लौटारो मार्टिनेज, इटालियन युभेन्टसका पाउलो डिबाला, इंग्लिस क्लब टोटनह्यामका जिओभानी लो सेल्सो, फ्रेन्च क्लब पिएसजीका लियान्द्रो पाराडेस, पिएसजीकै डि मारिया, स्पेनिस क्लब सेभिल्लाका लुकास ओकाम्पस, इटालियन एटलान्टाका अलेजान्द्रो गोमेज, डच क्लब आयाक्सका निकोलास ट्याग्लियाफिको, पोर्चुगिज क्लब बेनफिकाका निकोलास ओटामेन्डीसहितका खेलाडी परेका छन् ।
यस्तो छ अर्जेन्टिीको घोषित टोली:
प्रकाशित मिति २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०९:५४